Mini Desktop Aroma diffuser Sale amin'ny Amazon China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Mini diffuser Amazon,Mini Aroma diffuser Amazon,Mini Desktop diffuser
Home > Products > Mini diffuser > Mini Desktop Aroma diffuser Sale amin&#39;ny Amazon
[Mampamirapiratra fampisehoana maivana] Mihodina ho an'ny lokon'ny gradient 7 na koa apetraka amin'ny jiro miloko iray. Mamorona rivo-piainana milamina sy malefaka rehefa miasa ianao, miala sasatra, matory, spa, yoga ...
[Capacity sy Intermittent] Ny fahafaha-manam-bolo ny aromatherapy dia ny 160ml izay mety haharitra 5 ora. Ary ny diffuser ny hanitra dia misy làlam-pifandraisana, izay miasa 30 taona ary 30 fijanonana. Hanosotra ny tsindry, mandanjalanja ny toe-po ary manamaivana ny maina ny ririnina.
[Hevitra momba ny famoronana ho an'ny famoronana sy ny fanazaran-tena] Ny hamandoanay ultrasonic dia izay tena tadiavinao sy ny havanao. Ankoatr'izay, azonao atao koa ny mampiasa diffuser portable ho toy ny jiro mahavariana amin'ny alina.
[Ny antoka sy ny fiarovana azo antoka] Fitaovana maimaim-poana BPA misy fonony voamadinika. Fitaovana fiarovana izay hikatona rehefa mihena ny hanitra tsy misy rano. Ary mampanantena fahafaham-po 100% izahay.
Fanomezana fandriana kely fandriana atomizer Mini sy ny Humidifier
Mini diffuser mainty